Njengokuba iibhlog ezininzi kunye neewebhusayithi zipapashwa mihla le, inkxalabo eqhelekileyo kukwebiwa kwemifanekiso oyithengileyo okanye oyenzileyo ukuze uyisebenzise ngokwakho okanye emsebenzini. TinEye, Injini yokukhangela umfanekiso eguqukayo, inika abasebenzisi amandla okukhangela i-url ethile yemifanekiso, apho ungabona khona ukuba mangaphi amaxesha afunyenwe kwimifanekiso kwiwebhu nalapho besetyenziswe khona.
Ukuba uthenge umfanekiso wesitokhwe kwimithombo efana nomxhasi wethu Depositphotos, okanye iStockphoto or Getty Images, loo mifanekiso inokubonisa ezinye iziphumo. Nangona kunjalo, ukuba uthathe ifoto okanye wenze umfanekiso othunyelwe kwi-intanethi, ungumnini walo mfanekiso.
Ukuba awuniki ngokucacileyo imvume yomsebenzisi yokusebenzisa imifanekiso yakho okanye abayifaki ifoto yakho ukuba uyithumele kwiindawo ezinje Commons Creative, ke unelungelo lokuthatha amanyathelo asemthethweni ngokuchasene nabo bantu.
Ezinye zezinto ezintle ze TinEye ziquka:
Isalathiso semifanekiso mihla le yokufumana iziphumo ezingcono, phantse i-2 yezigidigidi ukuza kuthi ga ngoku
Ukubonelela nge- I-API yorhwebo onokuyidibanisa nesiphelo sendawo yakho
Ivula plugins kwizikhangeli ezininzi zokukhangela ngokulula
Kuko konke, TinEye yenza kube lula kubantu ngabanye ukukhusela imifanekiso kunye nepropathi ye-elektroniki. Qiniseka ukuba uhambisa isalathiso semifanekiso onayo okanye oyenzileyo kwaye unike ingxelo ngezo zibiwe.
tags: Ukukhangela umfanekisoinjini yokukhangela umfanekisophinda ujonge umfanekisotineye
Meyi 19, 2011 kwi-1: 02 PM
Abanini bamashishini abancinci kunye nabaqulunqi bewebhu abasaqhelekanga bahlala benza impazamo yokuthatha umfanekiso simahla kuba bewufumene kwiwebhu. Akunjalo kunye neenkqubo ezinjengeTinEye ezinceda abafoti ukuba babakhusele ekusebenziseni imifanekiso yabo ngokungagunyaziswanga, banokwenzakalisa nabanini bamashishini abancinci abangaqondanga ukuba basebenzisa "umfanekiso olawulwa ngamalungelo" kude kube lixesha.
Isisombululo sethu, bambelela kwiifoto zoqobo, okanye kwimithombo efana neStock kunye neFoto.com